ငွေတောင်းခံသည့်ဆော့ဝဲလ် - သင်ဘာတွေသိသင့်သလဲ Linux မှ
ငွေတောင်းခံသော software - သင်သိရန်လိုအပ်သည်
ဣဇာက်သည် | | applications များ
La ငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးရေးနှင့်စာရင်းကိုင် ၎င်းသည်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်လည်းမကြာခဏအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတာ ၀ န်သည်စီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်စရာမဟုတ်ပါ၊ အခြားတာ ၀ န်များအားအချိန်ပေးရန်အပြင်၊ ထို့ကြောင့်ငွေတောင်းခံသောဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်၎င်းတို့အားလုံးအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ဘယ်သူ့ကိုမှလိုပဲ၊ သင်မှားနိုင်ပါတယ် ငွေတောင်းခံလွှာပေါ်မှာ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လုံးချပ်လုပ်ရန်လိုသည်၊ ခြေရာခံရန်အတွက်ငွေတောင်းခံလွှာကိုဂရုပြုရမည်၊ ငွေပေးချေမှုရှိမရှိကိုခြေရာခံရန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးကိုဤငွေပေးချေသည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲမှအလိုအလျောက်သို့မဟုတ်လျော့ပါးစေနိုင်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အက်ပ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဤ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုကူညီခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
2 ငွေတောင်းခံ software ကိုအမျိုးအစားများ
Un ငွေတောင်းခံ software ကို ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများထုတ်ပေးခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ကွန်ပျူတာအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွတ်နှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အ ဇာတ်ကောင် ငွေတောင်းခံဆော့ဝဲအားလုံးရှိသင့်သည်မှာ
စွမ်းရည် ဆက်တိုက်ရေတွက် ထုတ်ပေးသည့်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ရက်စွဲများ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏။
၏ပါဝင်မှု အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒေတာ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်။
စွမ်းရည် ဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဖောက်သည်များနှင့်ပေးသွင်း၏။ အမည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊ NIF / CIF၊ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်စသဖြင့်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။
သင်တစ် ဦး ၏မည်သည့်ဒေတာကိုပြုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Editor ကို မူကြမ်း ကအတည်ပြုမီငွေတောင်းခံလွှာ၏။
အမျိုးအစားများရွေးချယ်ရေး အခွန်ကောက်ခြင်း (ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေခွန်၊ VAT၊ ... ) နှင့်စုစုပေါင်းပမာဏကိုတွက်ချက်နိုင်ခြင်း။
၏စနစ် အသိပေးချက်များ အချို့ကိစ္စများတွင်။
ငွေတောင်းခံလွှာ generate မှ function ကို proforma နှင့်ဘတ်ဂျက်.
အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်လည်းaဒေတာဘေ့စ / အစီအစဉ် ငွေတောင်းခံလွှာ၏ဖန်တီးမှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏အခွန်ဒေတာနှင့်အတူ။
ငွေတောင်းခံ software ကိုအမျိုးအစားများ
ဆော့ဗ်ဝဲအတွင်းမှာ စတော့ရှယ်ယာသို့မဟုတ်န်ဆောင်မှုများ၏ငွေတောင်းခံလွှာ သင်ရှာလိုရသည် ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ။ သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောရွေးချယ်မှုကိုပိုကောင်းအောင်သင်ကောင်းစွာသိထားရမည်။
အွန်လိုင်း- ဤအရာသည် ၀ က်ဘ်အခြေပြုငွေတောင်းခံသည့်အစီအစဉ်များဖြစ်ပြီးမည်သည့်အရာကိုတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၄ င်းတို့ကိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုသဟဇာတဖြစ်သောဘရောက်ဇာနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းစနစ်များ၏အားသာချက်မှာ၎င်းတို့အားသင်၏ဆာဗာလည်ပတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးမည်သည့်နေရာမှမဆိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်သင့်အတွက်သီးခြားကိရိယာတစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ မိုးတိမ်ထဲ၌ရှိနေသောအခါ၊ ဒေတာများကိုအရန်ကူးခြင်းများအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပဲအမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်
ဒေသဆိုင်ရာပြည်တွင်းငွေတောင်းခံဆော့ဗ်ဝဲဆိုတာသင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းမှာတပ်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးရှိပြီးစာဝှက်ထားသော်လည်းအချို့သောလုံခြုံရေးမထင်မှတ်သောအရာများသည်သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုပိုမိုလျှို့ဝှက်ထားရန်ဒေသတွင်းတွင်ထားလိုပေမည်။ ၎င်းအစီအစဉ်များသည်တစ်ခုတည်းသောအားသာချက်ဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့အွန်လိုင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အားနည်းချက်တွေပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခြားတစ်ခုခုကသင့်စက်ပစ္စည်းမှာဖြစ်ခဲ့ရင်သင့်ရဲ့ hard drive ပျက်သွားမယ်၊ မင်းက ransomware ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ backup မိတ္တူတွေမရှိဘူး၊ ဘဏ္fiscalာရေးအချက်အလက်အားလုံးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။
ဤအမျိုးအစားများအပြင်၎င်းတို့ကိုအခြားအမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်သည် အခြားရှုထောင့်အရသိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်တွင်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ငွေတောင်းခံသောဆော့ဝဲလ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အရင်းအမြစ်စသည်ဖြင့်ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သောအရာများကိုပင်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအချက်များမှတစ်ခုသည်ငွေတောင်းခံရန်အစီအစဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ အခမဲ့ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ငွေတောင်းခံ software ကို ၎င်းသည်အခြားပေးဆောင်ရသော၊ ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်ကိုမနာလိုဖြစ်စရာမလိုပါ။ ထို့ကြောင့်အချို့အချက်များအရ open source သည်စီးပွားဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများထက်ပိုမိုဆိုးဝါးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအချို့သောအချက်များအရဤအချက်များကိုအရည်အသွေးအချက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
သငျသညျလိုလျှင် အကြံပြုချက်အချို့ သင်ရှာနိုင်သောအကောင်းဆုံးငွေတောင်းခံဆော့ဖ်ဝဲအကြောင်း၊ သင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာအချို့ကိုတွေ့နိုင်မည့်စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငွေတောင်းခံ: ၎င်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များစွာပေးထားသည်။ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဒေသတွင်းထည့်သွင်းရန်၊ ဤကိရိယာကိုလက်ခံရန် web hosting ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများမှ service တစ်ခုအနေဖြင့် Cloud ရှိ SaaS ပုံစံအောက်တွင်ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအားပြည့်ပြီးလုပ်ဆောင်မှုအသစ်များထည့်သွင်းပေးသောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပလပ်ဂင်များကြောင့်ကြီးထွားမှုကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ငွေတောင်းခံလွှာများကိုစီမံခြင်းအပြင်၊ CRM သို့မဟုတ် ERP တစ်ခုလုံးရှိရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းထပ်မံထည့်နိုင်သည်။
FactusolDelSol Software သည်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများအားလုံးအတွက်ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်ဤစံပြငွေပေးချေခြင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များကြောင့်၎င်းကို ကျော်လွန်၍ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အရွယ်အစားကိုအရေးမကြီးပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်နောက်ထပ်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် MS Office suite နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် cloud platform မှတစ်ဆင့်မည်သည့်စနစ်မှမဆိုအင်တာနက်ကိုဒေသတွင်းတပ်ဆင်မှုအတွက် Windows အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကွီပူအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအလွန်ရိုးရှင်း။ အလိုအလျောက်ငွေပေးချေသည့် software ။ ကိုယ်ပိုင်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ လုံခြုံသောဘဏ်ငွေပေးငွေယူမှုများပြန်လည်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စာသားကိုသင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းကင်မရာဖြင့်မှတ်မိစေရန် OCR လုပ်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ Android အတွက် Google Play သို့မဟုတ်မိုthe်းတိမ်၌အသုံးပြုနိုင်ရန်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်၎င်းကိုသင်ရနိုင်သည်။
Debitoor- ၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံး cloud ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောအလုပ်ကိုခွင့်ပြုသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောငွေတောင်းခံလွှာပုံစံများ၊ OCR နည်းပညာဖြင့်စာသားကိုကင်မရာ၊ မှတ်တမ်းများနှင့်ချိန်ခွင်များအသိအမှတ်ပြုရန်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်နှစ်စဉ်စာရွက်စာတမ်း ၁၀၀ အထိယူရို ၄ လအတွက်အခြေခံငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်ငွေတောင်းခံလွှာ ၈၀၀ အထိယူရို ၁၂ / လနှင့်အကန့်အသတ်မရှိယူရို ၂၄ လအတွက်အစီအစဉ်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလည်းရှိသည်။
ရေတံခွန်သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစီမံရန်ဝက်ဘ်အခြေပြု ၀ န်ဆောင်မှု။ ၎င်းတွင်တင်းပလိတ်များ၊ နာရီများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ မှတ်တမ်းများနှင့်အတူဂရပ်ဖစ်မျိုးဆက်များ၊ Prestashop, Shopify, Woocommerce စသည့် e-commerce မန်နေဂျာများနှင့်ပေါင်းစည်းခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် (အခမဲ့ကန့်သတ်ထားသောအခြေခံအစီအစဉ်ရှိသော်လည်း) အွန်လိုင်းကြေးပေးသွင်းခြင်းအစီအစဉ်များနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသည်။
စကားစု- ပိုမိုသက်သာမှုရရန်သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်အသုံးပြုရန်ယခင်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု။ ၎င်းတွင်ငွေတောင်းခံလွှာပုံစံများ၊ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အခွန်အခများတင်ပြရန်ဖိုင်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စာရင်းကိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သူတို့၏စျေးနှုန်းအစီအစဉ်များသည်ယူရို ၁၀ မှ€ ၅၀ အထိရှိပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။
ပညာရှိတစ်ယောက်Sage သည်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲလ်၏လူသိများသော developer များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သူတို့သည်အလွတ်နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောငွေပေးချေသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများကိုသင်စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေမည်သို့ရှိကြောင်းစစ်ဆေးရန်ဂရပ်များထုတ်လုပ်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုစာရင်းပြုစုရန်အလိုအလျောက်ဘဏ်လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်မှုရှိသည်၊ သိုလှောင်ရုံများ၊ သုံးစွဲသူစွမ်းရည်စသည်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်၎င်းသည်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါ ၎င်းတွင်လက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူတစ်လလျှင်ယူရို ၇.၅ နှင့်ယူရို ၁၅ ဒေါ်လာရှိသည်။ (ယူရို ၁၀ နှင့်ယူရို ၂၀ မတိုင်မီ) စကားမစပ် Sage မှာလည်း mobile app တွေရှိတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ငွေတောင်းခံသော software - သင်သိရန်လိုအပ်သည်
Jorge က de loquendo ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလား မင်းရဲ့နေရာဘယ်မှာလဲ လိုင်စင်? အထုပ်? မင်္ဂလာပါ၊ Linux မ Engadget မှ၎င်း၏ကြော်ငြာဆောင်းပါးများမှဖြစ်သည်
Jorge de loquendo အားပြန်ပြောပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီကို Odoo သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး၎င်းသည် Ubuntu သိုလှောင်ရုံတွင်ရှိသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောတွဲဖက်အဖွဲ့များရှိသော်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း / လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အထူးငှားရမ်းခဲ့သည်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲကိုအရမ်းကြိုက်တယ်၊ အစီအစဉ်မှာဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိပြီးသေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေအထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ဝဘ်ပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ပြီးအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏သံသယများကိုအစတွင်သူတို့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာကတော့ယခင်စီးပွားဖြစ် application နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းချိုသာမှုနှင့်အတူပိုမိုများပြားသောအခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Lua 5.4 သည်ဤနေရာတွင်ရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အပြောင်းအလဲများနှင့်သတင်းများဖြစ်သည်
Fedora 33 သည် Vi အတွက် Nano ကိုပြောင်းပြီး BIOS အထောက်အပံ့ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်